फेरि संविधानकै लागि लड्नु नपरोस् !
काठमाडौं । नेपालले सातौं संविधान पाएको पनि तीन वर्ष पूरा भयो । लामो संघर्ष, आन्दोलन र बलिदानीपछि संविधान सभाबाट बनेको संविधानप्रति पनि आमनागरिकले पूर्णतः अपनत्व अनुभूत गर्न सकेका छैनन् ।
संविधान निर्माणको अन्तिम चरण र संविधान जारी भएपछिको केही दिन संविधानविरुद्ध नै आन्दोलन भयो । तर, संविधानविरुद्ध आन्दोलन गर्नेहरु नै अहिले सरकारमा छन् । यद्यपि, संविधान संशोधनीय दस्तावेज भनिएको छ ।
संविधानकै लागि यो देशमा धेरै पटक आन्दोलन भयो । र, बर्षौदेखि संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने धोको तीन वर्षअघि पूरा भयो । तर अब फेरि संविधानकै लागि संघर्ष गनु नपर्ने कुनै ग्यारेण्टी छैन । किनकि, यो संविधानप्रति सबैले अपनत्व अनुभूत गर्न सकेका छैनन् ।
नेपालको संविधानिक इतिहास हेर्ने हो भने धेरै लामो छैन । तर यो अवधिमा देशले सात वटा संविधान पाइसकेको छ । २००४ सालमा नै हामीले संविधान पाइसकेका थियौं । राणा शासनको अन्त्यतिर अर्थात् २००४ साल माघ १३ गते तत्कालिन राणा प्रधानमन्त्री पद्दमशम्सेरकै पालामा यो देशमा पहिलो पटक लिखित संविधान जारी भएको थियो । कतिपयले त्यसलाई संविधान मानेनन् । भलै, त्यो नेपालको पहिलो लिखित कानून थियो । संविधान थियो ।
तर, त्यो संविधान धेरै समय टिकेन । १०४ वर्ष लामो राणा शासनको अन्त्यपछि २००७ सालमा प्रजातन्त्रको उदय भयो र त्यतिबेला नै संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको कुरा उठेको थियो ।
तत्कालिन राजा त्रिभुवनको पालामा जनताद्वारा निर्वाचित संविधान परिषद्ले संविधानको निर्माण गर्नका लागि भनी २००७ साल चैत १९ गते अन्तरिम संविधान जारी गरेको थियो ।
तर, त्यतिबेला संविधानसभाको निर्वाचन भएन । तत्कालिन नेपाली कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीको संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माण गर्ने मागको राजा महेन्द्रले अस्वीकार गरे । र, २०१५ सालमा आम निर्वाचन भयो ।
राजा महेन्द्रले राजकीय सत्ता र अन्तनिर्हित शाही विशेषाधिकार आफूमा सर्न आएको दाबी गर्दै २०१५ साल फागुन १ गते अर्को संविधान जारी गरेका थिए । तर, त्यो संविधान पनि चार वर्षभन्दा टिक्न सकेन । र, पुनः २०१९ सालमा अर्को संविधान जारी भएको थियो ।
तत्कालिन राजा महेन्द्रकै पालामा अर्थात् २०१९ साल पुस १ गते ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०१९’ जारी भएको थियो । जुन संविधानमा नेपालमा राजनीतिक दलहरुलाई प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । र, नागरिकको मौलिक हकहरुलाई निस्तेज पारिएको थियो । जसकारण २०४६ सालमा जनआन्दोलन भएपछि, त्यसको. बलमा निदर्लीय पंचायती व्यवस्थको अन्त्य भई २०४६ साल चैत २६ गते नेपालमा बहुदल आएको थियो । जसलाई प्रजातन्त्रको पुनबहार्ली पनि भनिएको छ ।
प्रजातन्त्रको पुनबर्हालीपछि २०४७ सालमा राजनीतिक दलहरुले तत्कालिन प्रधानन्यायधीश विश्वानाथ उपाध्यायको अध्यक्षतमा ९ सदस्यीय संविधान सुझाव आयोग गठन गरी ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७’ निर्माणको जिम्मा दिएका थिए । उक्त आयोगले तयार पारेको संविधानलाई तत्कालिन राज वीरेन्द्रले २०४७ साल कार्तिक २३ गते देशवासीका नाममा संवोधन गरी जारी गरेका थिए । उक्त संविधानलाई दक्षिण एसियाकै नमूना संविधान भनिएको थियो ।
तर, उक्त संविधान जारी भएको चार वर्ष नवित्तै संविधानप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै तत्कालिन नेकपा माओवादीले २०५१ सालदेखि राज्यविरुद्ध सशस्त्र द्वन्द सुरु ग¥यो । १० वर्ष चलेको माओवादी द्वन्दका क्रममा हज्जारौं नेपालीले ज्यान गुमाए, अर्बौअर्ब मूल्य बराबरको भौतिक संरचनाको क्षती भयो । माओवादी सशस्त्र द्वन्दकै क्रममा राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ साल माघ १९ गते राज्यसत्ताको बागडोर समाए । जसविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेसहतिको सातलले सडक संघर्ष गरिरहेकैबेला विद्रोही माओवादीसँग २०६२ सालमा दिल्लीसम्झौता भयो, त्यहीं जगमा २०६२÷६३ सालमा दोस्रो जनआन्दोलन भयो । जुन आन्दोलन गणतन्त्र र संविधानसभाबाट संविधानका लागि भएको थियो ।
जनआन्दोलनपछि २०६३ सालमा २०४७ सालको संविधान खारेज गरी अन्तरिम संविधान बनाइयो । जसलाई नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ भनियो । र, संविधानका लागि २०६४ साल चैत २८ गते नेपालमा पहिलो पटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो । संविधानसभाको पहिलो वैठकले २०६५ साल जेठ १५ गते नेपाल गणतान्त्रिक मुलुक भएको घोषणा ग¥यो । २ सय ४० वर्षदेखि राज गर्दै आएको राजतन्त्र अन्त्य भयो ।
तर, उक्त संविधानसभाले संविधान जारी गर्न सकेन । र, २०७० साल मंसिर चार गते दोस्रो पटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो । र, त्यसपछिको संविधानसभाले अर्को संविधान अर्थात् अहिलेको संविधान जारी भएको हो । आमनागरिक चाहिरहेका छन्, अब कहिल्यै पनि संविधानका लागि लडाई लड्नु नपरोस् । मुलकमा राजनीतिक स्थिरता होस् र मुलुक समृद्धियात्रा द्रुतगतिमा अघि बढोस् । तर, अहिलेको राजनीतिक गति र दिशाले जनचाहना पूरा हुने छाँट छैन ।